केटी भनेपछि भुतुक्कै हुन्थे दिपेन्द्र ! यी हुन उनका गोप्य कुरा जुन दुनियाँसामु लुकाएर राखियो ! ( भिडियो सहित ) |
केटी भनेपछि भुतुक्कै हुन्थे दिपेन्द्र ! यी हुन उनका गोप्य कुरा जुन दुनियाँसामु लुकाएर राखियो ! ( भिडियो सहित )
२०७५, २१ जेष्ठ सोमबार १६:२१ June 4, 2018 ताजा खबरFeatured, समाचार
काठमाडौं : आज भन्दा १७ वर्ष पहिले अर्थात २०५७ सालमा युवराज दीपेन्द्र वीरविक्रम शाह आर्मीको ट्रेनिङ लिइरहेका थिए । प्याराजम्प ट्रेनिङका लागि उनको पहिलो दिन सुरु हुँदै गर्दा उनले फोनमा भने, ‘जब मलाई तिमी आफ्ना हातले बनाएको ब्रेकफास्ट खुवाउँछौ, तब मात्रै प्याराजम्प गर्छु ।’ फोनको अर्को छेउमा थिइन् देवयानी राणा ।
अक्सफोर्डसायरमा क्यामोयजको स्टोनर पार्क नामक भव्य बंगला छ । यही बंगलामा एक दिन पार्टी थियो । विलियमसँगै इटन कलेजबाट दीपेन्द्र आएका थिए, सोफीसँग देवयानी । यहीँ देवयानी र दीपेन्द्रबीच पहिलो भेट भएको थियो । १८ वर्षका दीपेन्द्र र १७ वर्षकी देवयानीले एकअर्कालाई यहीँ दिल दिएका थिए ।
फेरि समितिले सुप्रियालाई सोधेको थियो, तर तपाईंसँग केही कुरा हुँदैन ? अथवा म देवयानीसँग गर्दैछु भन्ने बारेमा ? जवाफमा सुप्रियाले भनेकी थिइन्, देवयानीका बारेमा मसँग अहँ । यो देवयानीलाई सोधे राम्रो हुन्छ ।
बूढानीलकण्ठ स्कुलमा कक्षा ७ मा अध्ययन गरिरहेकै बेला दीपेन्द्र सरकारले मसँग एक पटक आफ्नो पीडा ‘सेयर’ गरिबक्स्यो, ‘मलाई मुमाले अनावश्यक नियन्त्रण गर्न खोजिबक्सन्छ । तिमीले मुमालाई सम्झाइदेऊ ।’ यसमा मैले केही गर्न र भन्न सक्ने कुरा थिएन । खास कुरा त्यति बेला के परेछ भने सरकारले सुप्रिया शाहलाई मन पराइबक्सेछ ।
मैले देखेको दरवारमा विवेक शाहले दीपेन्द्रको युवती प्रेमका विषयमा बेलग्रेडको एउटा प्रसङ्ग जोडेका छन् । उनी लेख्छन्, वीरेन्द्र सरकार बेलग्रेड सवारी हुनुभन्दा दुई दिनअघि हामी त्यतातिर लाग्यौँ । राजदूत मोटर लिएर बेलग्रेड जानुभयो । हामी चाहिं जहाजमा गयौँ । दुई रात हामीले होटलमै बितायौँ । त्यहाँ पनि रातभर रक्सी खाने, डिस्को जाने गर्न थाल्यौँ । मैले कहिलेकाहीँ यसो नगरौँ भन्दा सरकार रिसाइबक्सन्थ्यो ।
उषाकी आमा भारतीय जनता पार्टीमा थिइन् भने दाजु माधवराव सिन्धिया काँग्रेस पार्टीभित्र शक्तिशाली थिए । सिन्धिया परिवार राजनीतिक रुपमा मात्रै प्रभावशाली थिएन, वित्तीय हिसाबमा पनि शक्तिशाली थियो। त्यसमाथि दरवारमा तीन पुस्तादेखि भारतीय राजघरानासँग विवाह गरिएको थिएन । देवयानीको लालनपालनदेखि पढाइसम्म भारतमा भएको थियो ।
दीपेन्द्रले देवयानीलाई सोधे, ‘आइतबार सुरु हुन लागेको राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटन कार्यक्रममा तिमी आउँछ्यौ होइन ?’ दीपेन्द्रले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन खोज्दै थिइन् देवयानी, तर मोवाइलमा आवाज स्पष्ट आएन ।